BREAKING: Alamu yakawanda yenjodzi yenyukireya pedyo ne! : Martin Vrijland
BREAKING: Alamu huru yenjodzi yenyika yenyu iri pedyo!
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 11 March 2019	• 10 Comments
Iyo yakawanda inokonzerwa nenjodzi yenyukireya inouya iri mumhepo huru yeEurope isimba ikozvino chikonzero chekusimudza kambani huru! Mifananidzo yakawanda inoramba yakanyarara pamusoro peizvi, asi kune nhamo yakaoma yose inogumburwa. Iwe unoziva zvigadzirwa zvemagetsi enyukireya muBorssele kana Tihange (Belgium)? Unoziva here zvakanyanya kukosha kwekutsvaira kwekugadzira magetsi enyukireya? Zvadaro teerera!
Munhu wose ari pamusoro peC40 anoyeuka njodzi yenyukireya yeChernobyl April 26 sezuro. Njodzi yenyukireya iyo ikozvino iri kuvhara ndeyoyo iri pedyo zvikuru neimba. Saka zvakakosha kuti iwe ugamuchire iyi mharidzo nekukurumidza sezvinobvira en zvakanyanya share! Isa pane zvose zvauri kuita zvino uye tora chiito ikozvino! Izvo zvakanyanya! Iko kune iwe kutumira e-mail, fax, kudhinda, kuparadzira uye kugovera izvi kuburikidza nehuwandu hwemagariro kune umwe neumwe waunoziva.
Tiri kutaura pamusoro penjodzi inobata zvakananga hupenyu hwevanhu! Njodzi yenyukireya ye mega yakawanda! Chimiro chemagetsi enyukireya chinoputika chinobudisa mhinduro ye 1: mahwindo nemasuo akavhara uye nokukurumidza kupinda muchivanze chokuviga! Njodzi yenyukireya iri mumiti muEurope inounza mazaisai emagetsi anokanganisa izvo zvinokanganisa zvokudya zvose nemvura yekunwa. Iyo miviri yakasimba kwazvo mumaminetsi mashomanana ekutanga kuti unoda nyuchikireya yemhepo yekurwisa mweya kuti urarame. Kuvhiringidzika kwekutengesa kamwe kamwe kunobatsira zvikuru, nokuti inobva kune imwe yechipiri kusvika kune inotevera. Icho chiri kutinhira mumatenga akajeka uye kudanidzira paredhiyo neTV inofambidzana ne-air alarm huru. Munhu wose ari mukutya uye migumisiro haisati yatarisika.
Zvisinei, njodzi yenyukireya inouya sembavha usiku. Iyi njodzi yenyukireya inofamba-famba. Mhete dzemabhero dzinyarara uye iwe unoramba uchirara norugare. Kana iwe uchinzwa kudanidzira kwekukurumidzira kubva kune kuputika kwechigadzirwa chemagetsi enyukireya nhasi, iwe unomhanyira kuvanza. Zvisinei, iyo inopisa chepfu inofadza uye isingadi; uturu hunopinda mumba mako; iwe hausi kuona icho chepfu uye iwe unoramba uchifema zvinyararire. Asi zvinokubata iwe pamwoyo wekuve kwako. Saka ndizvo njodzi yenyukireya.
Zvishoma nezvishoma muviri nemitezo zvinopinda. Iwe unomuka zvakare usina kunetseka mangwanani anotevera. Uyu muurayi anotora nguva yake. Anononoka kupinda muhupenyu hwako. Iwe haugoni kuzviona uye wotarisa kune iwe. Hapana munhu akapoteredza iwe uchaona. Hapana ari kutya. Hapana anoita seanomhanyira kumashure nekuora mwoyo. Munhu wose anodzikama uye kambani yemhepo inoramba yakanyarara. Kunyange redhiyo neTV zvinyarara. Tarisa maonero ezvekupedzisira zvekudya; hapana chinoratidzika sechisiri chakaipa.
Inzwi racho raiita serisina chinhu, asi harisi! Dambudziko nderokuti kushamiswa kwekuitika kwenjodzi yenyukireya kwaizoita kuti iwe usvetuke. Iwe hausi kucherechedza njodzi iri kuitika mukati. Dambudziko iri rakarara kwazvo. Iri njodzi iri kupararira kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa. Iyi njodzi haigoni kukundwa neredhiyo neTV. Idzo ndidzo inotyisa gasi vaparidzi! Media, social media uye kushorwa kunotungamirirwa ndeye michina yemwenje iyo gonye rinotyisa rinoputira nyika. Vanoparadzira uchetura hwevhuyi hwemhepo inouraya muBrussels uye The Hague. Vanokuchengetedza iwe muhope dzako uye vanoti "maziso akavharwa uye mhete", "mamiriro ekunze achava akanaka nhasi."
Vanotokuita iwe unobatanidzwa mubato rekugadzira. Iwe unogona kukonzera vhoti yako uye sarudza hutungamiri hwakanakisisa hwehuwandisi hwemhepo inouraya. Vanobva vadaro vanoona kuti uturu hunopinda nepakakoromoka kweimba yako hunopisa kunyange hunofadza. Iwe unogona kutova mutengesi kune huwandu hwehutu hwekugadzira mukana wekushambadzira uye uwane mari yako mukushandira maitiro ayo. PaTV unozoona kukurukurirana pamusoro pekunhuhwirira kwakanakisisa uye nhoroondo ye narcotic yekunaka kwakanaka. Iko mukoti anokupa pfungwa yekubatana.
Takatanga kuda rudo rwedu rwehupfu rinogadzira. Takatanga kutenda mairi. Hatizivi chero zviri nani, nokuti takaberekerwa munyika umo mutori wenyika ine chepfu yakagara iripo. Murimi uyo aigara ari mutariri. Isu tinogara tichiratidzwa nevamiririri vatsva nevatungamiriri. Yakave yakaita saizvozvo kwemakore. Vane Matthijs van Nieuwkerkjes vari kutengesa mafuta ehupfu muredhiyo, TV uye pepanhau. Bhokisi idzva remafekitari matsva panguva ino richaputira gasi rehupfu kuburikidza nemimitsva kunyange tastier. Ikozvino hupfu hunofadza hunova hwakanaka uye hunoita kuti uwedzere kudhakwa.
Nokuti fekitari inoda kuramba ichitengesa kukosha kwekuvapo kwayo, inova nechokwadi chokuti vanhu vari mudzimba dzekugara vanotya. Ndicho chikonzero fekitari inoramba ichiratidza kuti kunyange mhombwe dzakawanda dziri kuurayana pamwe chete nezvimwe zvombo uye zvechisimba. Kunyange kutarisa mabheji uye mafaira efoni hazvina kuchengetedzwa kune zvikwata izvi zvine ngozi. Magazini, redhiyo neTV zvinoratidza kuti varindi vefekitari yeguru yeguru vanocherechedza nyika zvakanyanya sei saka vanhu vari mudzimba vanoda kubhadhara zvakawanda nokuda kwekuchengetedzwa uku kose. Munguva iyi, vanonwa dhijidhi-nhizha dzemvura uye vanoona varaidzo pamutambo wekutarisa kana kuenda kune zvivako zvakakura apo vaongorori venyika yehuini yehuipi vakaparadzira sweets. Iyo futi yeguru yegasi yakanaka kune vanhu. Iyo inochengetedza mumugwagwa uye inopa hurumende yekunamatira yezvose mvura yekunwa, iyo chimney pipe uye zvimwe zvivako.
Mushure meHondo Yenyika Yechipiri, iyo feji yegasi yefeji yaiva chaiye yega ine mari shoma yekuvaka zvakare nyika. Zvadaro takabvumirwa kusarudza vatungamiri venyika yeguruji yeguruvheni vakabvumirwa kuvaka zvakare nyika. Isu tinogona kusarudza kubva kuvanhu vakasiyana-siyana kubva kufeji yeguru yeguru. Munguva iyi ndivana vazukuru nevakwepedzi vemhuri kana hama dzevaimbova vashandi vanopa vatungamiri vefekitari uye avo vakanaka chaizvo. Vamwe vanoti chaizvo zvandinofunga, somuenzaniso, uye dzimwe nguva ivo vakanyanyisa kubhodheni rekare. Ndiyo munhu mukuru! Saka pavanondiidza kuti ndiende kumisarudzo, ndinosarudza munhu wandinofarira zvikuru. Nguva ino ndinoziva: zvichava kuti mumwe anopandukira!
Ndakanzwa kuti muchengeti weguru remhepo wakangwara zvokuti vanotora dhipatimendi iro rinoramba rakatarira vanhu. Uturu hunokonzerwa nefekitari hunochengetedza vanhu muhurumende dzisingaperi, asi zvino vanogona kuita basa ravo sekugara. Iye zvino uye pane vanhu vanoda ruzivo rwakakura rwehupfu hwehupfu. Vanobva vangoerekana vasingabvumirani nevakasarudzwa vekutungamirirwa kwefekitari. Zvinoratidzika kuti iyo inouraya gas producer yakatorawo vavakidzani vako kuti varambe vakatarira zvinhu. Vanorongawo mararamiro avo pachavo kuitira kuti vanhu vagone kupfura pfuti shoma.
Asi zvakadaro, vanhu vakawanda zvino vanovimba nehupfumiro uye maitiro ehuini yehuipi yehupfu; vanhu vakawanda vane basa related to of yakapiwa na iyo fekitari gas factory, iyo inenge isingakwanisi kufungidzira dhiyabhorosi fekitari kubva muupenyu hwezuva nezuva. Ndicho chikonzero nei vanhu vachiramba vachivhota kwebhandi idzva refekitari uye uturu hwave hunova hunofadza kupfuura makore. Iwe unogona kuenzanisa nekuenzanisa nemhando ye ecstasy.
Muvanhu vepfuura vangangodaro vachinge vachinge vaine mapikisi avo uye vakavhara tende rose. Ifekitari yakabva yavaka boka guru revarindi. Pfinikiti inotya kutyisidzira iyo iyo inofambisa zvinhu zvose uye munhu wose kwese kwese. Vanodaro nokuti vanotaura kuti kune marudzi akajeka avo vanoda kuedza kurwisana pano neapo, asi pakupedzisira kuchengetedzwa kwefekitari uye chimiro chekwenyasi inowedzera. Vaizoita sei dai vanhu vari mudzimba vakamira kupinda muhuwandu? Sei vanhu vari mudzimba vakatanga kutenda uye kuvimba nefeji yegesi yefekitari? Ndizvo here nokuti vakagadzirisa kunhuhwira uye kuravira nenzira yakadai kuti vakatanga kuifarira?
Vanhu vaiwanzozvigadzira ivo pachavo. Iye zvino ivo vanovimba zvakakwana. Ivo vave vakajairika kune anesthetic uye chaizvoizvo hakuna munhu kubva kune iri chizvarwa iye achiri kuziva kuti chii chakanga chakaita kurarama pasina unesthetic yehupfu.
Asi hongu, iniwo ndinotsunga kusavhota. Ipapo ndakaita chimwe chinhu. Uye handina pfakiki zvakare. Ichokwadi, ini nevavakidzani vangu tatova nekutya, vanhu vanovimba, asi tinoshamisika kuti tichiri kutarisa tubhuti yedu. Kana kuti ndingabvunza muvakidzani wangu here kana asingadi kubvisa tsvina iyo? Zvichida iye achaputsawo mukana wake? Oo, ichokwadi: anoshandisa varindi vefekitari. Kana ndichandomubvunza here? Izvo zvakashata chepfu yeguru!
Verenga nyaya idzi pane webhusaiti iyo inokuyambira zvakadzama pamusoro pemvura inotyisa inopararira pamusoro pako. Endai kumusha wekutanga uye shandisai nenyaya. Iwe unofanirwa kusvetuka uye kutora chiito nokukurumidza kana ukaona zviri kuitika! Iwe waizokurumidza kunyevera mhuri yako neshamwari! Asi iwe hausi kuita chinhu. Iwe unoda kumirira kusvikira mapurisa emadhipatimendi ehurumende akazvigadzirisa zvizere iwe uye iwe nevana vako haugoni kuenda chero kupi zvako. Kana iwe unofunga kuti zvose zvichava zvakanaka, chero bedzi iwe nevana vako muchiri kushanda kuti muve nemhizha kana mamwe mabasa akafanana. Iwe unobatsira kuvaka jeri rako pachako uye nehupfu hwekupfurikidza nekugara usingatauri. Nguva yaro the revolution!
5G uye kutumidzwa kwevanhu
Brain-Computer Interfaces ikozvino munguva pfupi: Ko Facebook ingakurumidza kuverenga pfungwa dzedu here? Mhinduro: hongu
Microsoft Hololens 2 inonaka yezvinogona kuitika neukombiyano hwehuropi
Chikonzero nei Luciferianism, uroyi uye kutengesa kunowedzera
Chikonzero nei Elon Musk's skynet, nanotech uye zvirwere zvichaona Ascension
Mubhadharo wevaranda akanyora kuti:
11 March 2019 pa 10: 14
Tichaparadzanisa sei denderedzwa iri rakaipa rekuvimba?
Kunze kweanhema, tinodzidza kubva muzera rekusava nekuzvigadzirira mune dzidzo, asi kutora nzvimbo mumamiriro ezvinhu semunhu mukuru. Iyi nzira inodzvinyirira uye inoshandisa vanhu. Dzidzo yakamanikidzwa, chirongwa chekudzivirira, mutero unosungirwa ... iwe unofanirwa kugara nemutemo, apo avo vane simba uye vane hurumende vanobatana vanozvidza mitemo nemirairo inorongwa navo.
Kana iwe ukaona mabhuku mangani okutyisidzira wandakave nawo muupenyu hwangu kubva kumagweta, haungatendi kuti iyi yaiva demo rezvematongerwe enyika. Oo hongu ... kunyunyuta kunobvumirwa, asi kuitora kwakanaka ndeimwe nyaya.
Saka: Hatingagoni kunyunyuta uye isu tinofanira kuita zvakanakisisa!
Kana izvozvo zvisingakwanisi, iwe unongova benzi chete, nokuti ndevaya vakangwara, vakagadzirira uye vane simba vanoita basa vanobudirira ... chakanaka?
11 March 2019 pa 10: 22
Pane imwezve munhu pane iyo inonzi gesi inouraya isingashande uye ndiani akavaka kushorwa. Ngatione kana tichikwanisa kubata vanhu vakadaro nedzimwe nhepfenyuro yedu uye maAI maitiro .. uye zvimwe enda kune gulag
11 March 2019 pa 10: 49
Nenguva yakazara, ini ndichiri nemapokisikiti akakwana, mazhenje uye zvinoshandiswa ... pedyo neketraws maviri nedzimwe shandiswa dzemasango, kusanganisira (yakapinza) maje. Hongu, iniwo ndinoziva nzira yekuita nayo! Zvichida zvakakosha apo patinosangana paGoelag, nokuti ipapo tinogona kugara imomo nemhepo inodziya, kana vasingatori.
de.voetkliniek@telenet.be akanyora kuti:
11 March 2019 pa 11: 52
Chokutanga pane zvose, ndinofanira kukutaurira kuti hauita seunoziva zvakawanda nezvazvo. Kune musiyano wemasikati neusiku maererano nekuvaka nekuvaka. Ndicho chikonzero chichatofanira kushamisa zvikuru kana michero yenyukireya ichivhuvhuta. Iko kunotonhorera zvirongwa zvakasiyana zvakasiyana uye nekuchengeteka. Mapapiro ari mumitambo haagone kushanda zvachose. Nenzira iyo, kana ikandifambisa zvakanaka, vaDutch ndivo vanogadzira yemidziyo yemitambo uye vakaziva kubvira pakutanga kuti kuparara uku kwakanga kuri mairi (kusagadzikana kwekugadzirwa kwezvinhu) uye kuchiri kuendeswa.
11 March 2019 pa 11: 55
Zvadaro ndinofanira kutaura kuti pamwe hauna kuverenga nyaya yacho yose uye iwe hauzive kuti ndinoshandisa chirevo kuti ndiite chimwe chinhu chakasiyana zvachose.
11 March 2019 pa 11: 59
Chirevo (kubva muchiGiriki metaphora: kutumira; chirevo: kutendesa kana kufananidzira; kushorwa: chaiyo) iyo inomiriro yemifananidzo, umo mune kuenzanisa kusina (unspoken).
11 March 2019 pa 12: 49
Belgium hahahahaha! dambudziko / chiito / kwete sarudzo 🙂
Sunshine akanyora kuti:
11 March 2019 pa 14: 58
Great article iwe wakanyatsojekesa nguva nekucherechedza. Sezvo ini ndine hanya, shanduko yehurumende inoshanduka, republica iyo inoda chaizvo democracy, kodzero dzevanhu chaiye. Asi hongu, sezvandakanyora kare, vanhuwo zvavo vanoda kuve varanda kune vanowanzofungidzirwa, avo vari kunze. Vanhu vakajairika vanotodzivirira avo vanowanzofungidzirwa nevanenge vachiita nyaya.
IWelp Holland zombiland, nyika yezvinodhaka, zvinonyadzisira, vana vanoona zvinonyadzisa, mari yekutengesa nyika, chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvinofungidzirwa nyika, chikwereti nyika inobata nyika dzine chikwereti mucheka uye hairegi kuti vasunungurwe. Izvi zvinongoshanduka apo avo vanowanzofungidzirwa vakapa zvigaro zvavo. Izvozvo hazvizoitiki zvizere. Sarudzo haibatsiri pane zvinopesana.
AnOpen akanyora kuti:
11 March 2019 pa 22: 32
Hahaha, zvakanyatsofungidzirwa uye zvakatsanangurwa zvakanaka!
Nhengo yakanaka ye "njodzi yenyukireya", kukumutsazve nenzira yakasiyana.
guppy akanyora kuti:
12 March 2019 pa 06: 10
Kungofanana neyodini mapiritsi anozadza chirwere chetrojeni, tinofanira kuve nechokwadi chokuti mweya yedu yakazara nechokwadi kuitira kuti madhimoni asina simba.
Iwe unogona kuwana chete chokwadi ichi nokuunganidza mashoko kunze kwekunzvimbo yako yekunyaradza nekuita tsvakurudzo mukati mako.
Nenzira iyo unodzidza kuzvidzidzira iwe uye pakupedzisira iwe unodzivirirwa nehupfu hwekunze.
« Unofanira kuverenga izvi zvinyararire kune chidzidzo chaicho muupenyu
Kukurumidza kukudana! »
VESITHI NAJULY 2017
Total Visits: 15.972.800
Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1
Iyo pwere yanhasi inoda kuzadza-dzidzo misasa (gulags) nevanoramba mamiriro ekunze
Iyo coronavirus kubva kuChina inopa iyo yakakwana alibi yekubvumirana kupora kwese
Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey
Transgender murume anozvara mwana asiriye wemubinji wemwana wemurume nemukadzi anouraya mbeu
Martin Vrijland op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1
SalmonInClick op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1
SandinG op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1